अमेरिकाले दिएको ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ खोप लगाउन सुरु, प्रधानमन्त्रीले गरे अनुगमन - Everest Awaj Everest Awaj
अमेरिकाले दिएको ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ खोप लगाउन सुरु, प्रधानमन्त्रीले गरे अनुगमन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजदेखि शुरु भएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ अभियानको निरीक्षण एवं अनुगमन गरेका छन् ।
केन्द्रीय युनिफाइड अस्पतालमा प्रधानमन्त्री देउवालाई उपनिर्देशक डा. अशेष ढुङ्गेलले खोप लगाउनका लागि आयोजना गरिएको व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले अस्पतालमा खोप लगाइरहेका बेला निरीक्षण गरेका हुन् । उनीसँगै नेपालस्थित अमेरिकाका राजदूत ¥याण्डी बेरी पनि थिए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका बालस्वास्थ्य तथा कल्याण शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले आजदेखि काठमाडाँै उपत्यका, काभ्रे र गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लामा उक्त खोप लगाउन थालिएको जानकारी दिए ।
नेपालमा अहिलेसम्म ६५ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा खोप आइसकेको छ । मुलुकमा अहिलेसम्म २९ लाख ९९ हजार २१४ पहिलो मात्रा र ११ लाख २९ हजार ९०८ दोस्रो मात्रा खोप लगाइसकिएको छ । (रासस)